Anjozorobe : naiditra am-ponja ilay mpamily sy ny tompon’ny kamiao | NewsMada
Anjozorobe : naiditra am-ponja ilay mpamily sy ny tompon’ny kamiao
Naiditra am-ponja vonjimaika, omaly hariva any Antanimora ilay mpamily sy ny tompon’ilay kamiao namoa-doza tany Anjozorobe, aasabotsy teo. Notanterahina omaly ny fakana am-bavany nataon’ny zandary sy ny fanolorana ny fampanoavana azy ireo, ary nalefan’ny mpitsara mpanao famotorana any am-ponja avy hatrany. Miandry ny fitsarana azy ny mpamily ilay kamiao sy ilay tompona fiara.
Araka ny fanazavana, tsy afaka amin’ilay loza ny tompon’ny kamiao satria namela ilay fiara hampiasaina hitaterana olona, na mifanohitra amin’ny lalàna aza izany. Ilay mpamily izay efa nametrahan’ny fianakaviana fitoriana sy ny fijoroana vavolombelona fa tompon’ny fahadisoana tamin’iny loza iny. Nahenoana fofon-toaka, nandeha mafy, nanidy ireo mpandeha tao anaty labasy. Ny fitsarana anefa no manameloka azy ireo rehefa mivoaka ny didim-pitsarana.
Raha tsiahivina, ny asabosy teo no nivarina tao amin’ny tetezan’i Mananara ilay kamiao, rehefa avy nilanonana tamin’ny fangataham-bady, ary saika hamonjy soratra tany Talatan’Ivolonondry. Olona 47 no maty, 24 naratra, ary valo nalefa aty an-dRenivohitra notsaboina. Anisan’ny velona ilay mpamily, notsaboina ary izao nalefa any Antanimora izao.
Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail 21/09/2021
Laminasa fanarenana vaovao 21/09/2021